साङ्गीतिक फाँटका सदाबहार जोडी भन्छन् : हाम्रो जीवन जहिले पनि भ्यालेन्टाइन - Seven Nepal
बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ | Thursday, February 14, 2019
साङ्गीतिक फाँटका सदाबहार जोडी भन्छन् : हाम्रो जीवन जहिले पनि भ्यालेन्टाइन
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०२, २०७५ समय: ७:४५:३७
नेपाली संगीत क्षेत्रमा एउटा यस्तो जोडी पनि छ, जो संगीतको लागि मात्र नभई आदर्श प्रेम जोडीको रुपमा पनि परिचित छ । आफ्नो सफलताको जस दुवैले एकअर्कालाई दिन्छन् । जीवनका उकाली सङ्गै चढ्ने, ओराली सङ्ग सङ्गै झर्ने, एक अर्काका लागि जेसुकै बलिदान गर्न पनि तयार हुने– यो जोडीको जीवनकथा हामी सबैको लागि प्रेरणा बन्न सक्छ । यो जोडीको जीवनका पलहरु केही संघर्षका कथा, केही प्रेमका मिठा अनुभूति र केही हास्य रसले भरिएका– बडो रोचक र रमाइला छन् । मायाले नाप तौल गर्दैन मायाले दिने मात्र रहेछ । यही कारण त उनीहरुको उपलब्धि नै मनिला र उदय सोताङ रह्यो ।
मनिला उदयको फ्यान हुन् पहिलेबाटै । एकदिन कन्सर्टमा मनिलाले उदयलाई देखिन् र भेट्न चाहिन् । एकअर्कासँग माया बस्यो । काममा पनि सङ्गै जान थाले । प्रोगाममा सङ्गै जाने । अभ्यास सङ्गै गर्ने । यसैकारण डेटिङ्ग जाने मतलब नै रहेन । विवाहभन्दा मायालु, आत्मीय, मित्रवत र विश्वासिलो सम्बन्ध अरु के होला र ? उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिए । उदयबाट मनिलाले धेरै माया भने विवाहपछि नै प्राप्त गरिन् । त्यतिवेला उदय बल्ल एघार सक्दै थिए मनिला भने एस.एल. सी सकेकी थिइन् ।
उदय भन्छन्– हामी एकअर्काको बानीसँग ‘रगरग’मा परिचित छौँ । उदयलाई मनिलाको एकाध बानीबाहेक सबै मनपर्छ । ‘ऊ मोटी छे, एक्सरसाइज गर्नै मान्दैन । रियाज गर्न पनि समय दिन्नन् । यो बानी मलाई मन पर्दैन’, उदय भन्छन् ।
मनिला हाँस्दै भन्छिन् ‘कहिले सिकाउने भए पो गर्नु । उहाँले मलाई कहिले सिकाउनु त हँुदैन ।’
मनिलाको केयरिङ, मायालु बानी, हतपत नरिसाउने स्वभावको फ्यान हुन् उदय । मनिलाको रिस पाँच/दश मिनेट भन्दा धेरै टिकेको छैन आजसम्म । तर, उदयको भने एक हप्तासम्म रिस नै जाँदैन । उनी रिसाएको बेला मनिला र छोराछोरी समेत नजिक जान डराउँछन् । कहिलेकाँही साथी भेटेपछि उदय घर आउनै भुलिदिन्छन् । यो बानी मनिलालाई पटक्कै मन पर्दैन ।